Venice Beach, CA: Enclave yetsika, hunyanzvi uye hupenyu. - Hanukeii
Venice Beach, CA: Enclave yetsika, hunyanzvi uye hupenyu.
Zvakaitika kwauri kuti pese paunoona akateedzana kana bhaisikopo rakagadzwa muHollywood kana California, seCSI kana 'Baywatch' kune nzvimbo yakatove inozivikanwa kwauri nekuti wakamboiona kanopfuura kamwe chete: Gungwa rine mafungu ane simba, nzvimbo yekutarisa yegungwa, mureza weUnited States, vanhu vachimhanya, skaters, vhiri raFerris riri chinhambwe, uye matembere edzimba ane mavara akasiyana pakati peturu, pingi nemuchena. Pamwe tiri kutaura nezve zvakafanana nzvimbo izvo zvave zvichikwezva kumafirimu makuru uye zvigadzirwa zvevaraidzo, pamwe nemaartist uye vagadziri vachitsvaga nzvimbo inovakurudzira kuti vagadzire, sezvazviri mune Hanukeii.
Pasina kutora zvimwe zvinodzokororwa uye sezvaunogona kufungidzira, pane nzvimbo maminetsi makumi matatu kubva kudhorobha reLos Angeles izere nenhoroondo, tsika, zororo, hunyanzvi uye nemahombekombe, isu tiri kutaura nezvazvo. Venice Gungwa.Iyi nzvimbo yaimbove yakafemerwa neVenice, Italy uye nhasi yave kurudziro yedu yekusika kwedu kuunganidzwa kwemakepesi. "Venice Turquoise", asi tisati tawedzera kukuudza nezve edu makapeti - ayo akatonhorera munzira - tichaenda kukuudza zvinoda kuziva, nzvimbo dzaunofanira kuona kana ukashanyira guta reBohemian reUnited States.
Kana kukudzwa kwatorwa nemahombekombe uye neguta reSanta Monica, iyo Pacific gungwa yeUnited States inzvimbo isingabvumirwe inzvimbo inokwanisa kugamuchira mhando dzese dzerunako netsika, kubva kune avo vanoda zvemhando yepamusoro, kunyaradzwa, kudzikama, kunyangwe avo vane ruzivo. , ine mweya weBohemian, vatambi vemitambo uye vanoda mafungu. Kufarira kwemahombekombe aya kwakakura zvekuti yave imba yevakakurumbira saJulia Roberts, Nicolas Cage, Arnold Schwarzenegger uye kunyangwe mugadziri ane mukurumbira weGuggenheim Museum muBilbao, Frank Gehry.
Asi chii chiri nezveVenice Beach chinoita kuti ive chaiyo uye yemashiripiti nzvimbo. Kune izvi isu tinofanirwa kudzokera kumashure muna 1905, apo Abbot Kinney, mumwe muoni uye ane mukurumbira dhizaini, akaona Venice pachiteshi chakakomberedzwa nemachakwi. Akanga achangodzoka kubva kurwendo rwake rwekuEurope uye akafadzwa nemigero uye chokwadi chekuti guta rakange rakaiswa pamusoro pegungwa, akagadzira mumusoro make dhizaini yezvaizove hunyanzvi hwake hunotevera. Zvisinei, uye sekuona sezvazvaive, kuisa mhando yetsika kune imwe nyika kwainge kwakaoma panguva iyoyo. Kamwe kusvikika kunharaunda ino yemahombekombe eCalifornia kwakavandudzwa nekutenderera kwemigero, kuvakwa kwepaki yekutandarira kwakatanga pamwe nemahombekombe, kuchinjisa dutu rekare kuita nharaunda ine mhuri yakasimba yekukwezva vekirasi yepakati.California yakakwira.
Iyo nyaya haigumire ipapo, kunyangwe kuyedza kuumbazve Venice pamhenderekedzo yeSanta Monica, iyi enclave yakatora maitiro ayo uye nhungamiro. Kusvikira nhasi, inongochengetedza mimwe migero yayo yepakutanga, yakakomberedzwa nechalet dzoumbozha uye zvidimbu zvidiki zvinoshandira vagari kutamira pakati peguta, kana kufamba pakunyura kwezuva. Iyo Little venice kuti Abbot akafungidzira panguva iyoyo akaita 360º kutendeuka uye isu tichaenda kukuudza nezvazvo, nekuti kana iwe ukaenda kuCalifornia mhenderekedzo, UNOFANIRA kuenda ku Venice Gungwa, inofungidzirwa kugungwa nemhepo yakawanda muUnited States.
1. Vane muchina unofona.
Kunyangwe kukwezva kwaro kusiri iro chete ruvara rwemvura yaro, Venice Beach ine chimwe chinhu chekuda iwe paunosvika. Chinhu chekutanga chauri kumhanyira mairi Abbot Kinney Boulevard, ndima ine chero nhamba yezvitoro zve haute couture, kukwezva kwendima iyi kwakaita sekunge wakafamba nesekondi kuenda kuNew York. Kana kuti uve muenzaniso wakanaka pazviri, ndeyekuti kana iwe uri munzvimbo yemahombekombe yeLos Angeles, yambuka kona ukazviwana uri munzira yechishanu muNew York, unogona kuzvinzwa uchifamba nepakati peManhattan, asi kana ukatarisa zvimwe kumahombekombe kune zuva rine mahombekombe eSouthern California irikukwazisa. Muchidimbu, iwo mweya weBohemia unoratidzwa mune imwe yemahwindo ezvitoro zveumbozha zvinotora hudyu yetoni.
2. Zvakajairika kuona vanhu vanopfuura vevanhu vachifamba mumahombekombe ayo.
Zvino, kana iwe ukaenda zvishoma kumberi uchienda kumahombekombe zvichave zvakajairika kuwana vanovaka muviri, muchokwadi, ndeimwe yezvinokwezva: jimu yayo yekunze 'Muscle Beach', inokodzera kune vanoda mafirifts uye vachifamba pamhenderekedzo vakatarisa yake mhasuru uye yakakwana tani. Kunyangwe, vagari veko vanoti, iyi yaimbova imwe yemitambo iyo Arnold Shwarzenegger yaiwanzoitika mumazuva ake eTerminator. Asi haisi chete diki yekurovedza iri pajecha uye yakatarisa kumahombekombe, iwe unogona zvakare kunakidzwa padyo nayo; dare rebhasikiti, nhandare uye imwe yeiyo kuverengwa chinomiririra uye nhoroondo nguva dzese, zvinova ndizvo zvaticha taura nezvazvo.
3. Mamwe mafungu anogadzirwa nesamende.
Vamwe vanogona kunge vasingazvizive, asi muchikamu Skateboarding yakamuka muCalifornia. Hongu uri zvishoma geek zvemutambo uyu uye nhoroondo yawo, zvirokwazvo waona bhaisikopo Vanashe veDogtown, Huye, Venice Beach yaive nesimba rakakura pakuva imwe yemapoinzi emisangano yeavo vafambi avo vakapererwa nemafungu uye vakatanga kuyedza kuita skateboarding. Muchokwadi, iwe unogona kunge uchiziva zita raJesse Martínez, mumwe weiyo vachengeti yeDogtown. Kuve mumwe wevanhu vane mukurumbira mu skateboarding, aive neichi chiitiko.
Kwaari, apedza hujaya hwake muVenice Beach panguva yemakore makumi masere zvainge zvakafanana nekuhwina rotari pazera diki kwazvo. Iyo mhepo yaive yakagara ipapo yaive yakasarudzika uye inosetsa kwazvo. Ndokusaka akafunga mu80 kutanga kuvakwa kweVenice Beach skatepark, inova nhasi chikamu chegwaro rakakura rinonzi "Made in Venice". Iyi skatepark yakanyorwa seimwe yeinonyanya kudhura pasirese.
4. Kwazvinogumira uye kutanga zvinoenderana nemaonero.
Zvino, Kupera kwenzira? Izvi ndezvei? Zvichida wakambonzwa nezveRoute 66, iyo inoyambuka United States kubva kumabvazuva kuenda kumadokero, kunyatsojeka: inobatanidza Chicago neguta reLos Angeles. Ngatitaurei tikuudzei kuti Venice Beach ndipo panogumira nzira iyi.
Sei nzira iyi yanga ichikosha? Mushure mekushushikana kukuru muna 1928 uye nesimba rakasimba rekusanaya kwemvura, indasitiri yekutengeserana muUnited States yanga ichitsvaga nzira yekumutsidzira kwayo. Kuve kwayo Atlantic mhenderekedzo yakanyanya kukanganiswa zvese nehupfumi mamiriro uye nekuwedzera kwekutama kwekuyerera kwakayedza kuyambuka nyika ichitsvaga "nyika yechipikirwa".
Kureba kwayo makiromita mazana matatu nemakumi mana nemakumi mana, uye munzira mitezo nhengo zhinji dzekufambisa hadzikwanise kusvika kwavanosvika kwekupedzisira, kwete nekuti chimwe chinhu chakaipa chakaitika, asi nekuti vakawana nzira yekutanga hupenyu hwavo munzvimbo dzakasiyana munzira. Nekudaro ichipa nzira kugadzirwa kwemahotera, mashopu, maresitorendi uye magasi mafuta. Points inoyevedza zvekuti inoita nzira iyi chiratidzo.
Pasina kupokana, iyi nzira yakanaka, yakakodzera firimu rekunakidzwa, pamwe ne, semuenzaniso, Thelma & Louise, vapoteri vaviri vanotifadza tichiyambuka nyika nechitarisiko chinoshamisa uye takapfeka mhando yemagirazi katsi ziso s Laguna Nhema, de Hanukeii.
Saka kana iwe uri kushanyira Venice Beach iwe uchawana chiziviso chekupera kweRoute 66, uye iwe uchaziva kuti inzvimbo yemusangano yevafambi, vafambi, uye zvakanaka munguva dzino zvakare mumwe kana mumwe anokurudzira, asingazosiya mari ino nguva pasina kuifotora, nekuti pasina kupokana, inzvimbo ine yakawanda, yakawanda nhoroondo.
5. Art ndeyekuitira hunyanzvi.
Kana chimwe chinhu chakamira muVenice Beach chiri turquoise, muchokwadi, chikamu chakakura chemashure ayo chine ruvara urwu, zvinoita sekunge chero munhu akazvigadzira akafemerwa nemusiyano uyo mutsvuku mutsvuku wekuvira kwezuva unopa pamberi pedzimba . Naizvozvo, kana iwe uri muartist iwe unozofungidzira pamwe nenzvimbo ino. Kana iwe ukafunga kuenda kudzika zvishoma mukati mebohemian netsika nharaunda, iwe unowana anoverengeka ezvitoro, ese ane mavara kwazvo. Mavari iwe unowana zvechipiri-zvemaoko zvitoro, antique zvitoro, zvine hutano chikafu maresitorendi, emumaguta maartist, mhenyu zvesimba. Makona ese enzvimbo ino achave nechimwe chinhu chekuudza iwe, tinokuvimbisa kuti hapazovi nenzvimbo yekufinhwa, nekuti sekutaura kwatakaita inoonekwa seimwe yemahombekombe emuchadenga pasi.
Iyo muralist Rip Cronk yakagadzirirwa izvi Little venice inoshamisa mural yakafuridzirwa neadriatic uye kuendeswa kune pacific. Iwe uri kuzomhanyira muBotticelli's 'Kuberekwa kwaVenus', kwazvino uno, kutasva pamateyiti maviri akatarisana nemvura yakachena yekristaro yeVenice Beach. Asi izvi zvinogoneka sei? Cronk aiziva kuti izvi zvinokonzeresa mhirizhonga, asi iri iguta reAmerica rakagamuchira mweya weEuropean pasina kukanganwa zvakakosha zvehupenyu kana uchikoshesa hunyanzvi. Pamusoro pekushamisa kwazvo kuona iyi Venus yemazuva ano, irwowo ruvara rwehuturu rwechiumbwa, icho sezvatakataura kuti unorangarira mumigwagwa yese yeguta.
Nechikonzero ichi, patakatarisa nzvimbo ino, takafunga kuti zvingave zvakanaka sei kuva nekepisi inoburitsa hupenyu pachahwo, asi zvakare inotikurudzira kugadzira, kupa hupenyu kuburikidza nehunyanzvi, kuti pese paunoiona iwe unofunga kuti hupenyu yakapusa, isina kuomarara, hupenyu ihwohwo uye hunyanzvi. Uye kuti iri vara chinhu chekutanga chaunofunga nezvacho chiri, muVenice Beach, iro guta retsika, hunyanzvi uye kunakidzwa.
Isu tinovimba iwe wakada pfupiso yedu diki yekona ino yemashiripiti yeCalifornia mhenderekedzo, uye kuti nguva inotevera paunofunga nezve kupenga muhupengo iro guta reLos Angeles rinogona kuva, rangarira kuti maminetsi makumi matatu kure ndiko kupukunyuka kudiki kwevanoda #barefootlife.